January 22, 2021 - Khitalin Media
ရေနွေး ထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး ညအိပ် ခါနီးတိုင်း သောက်ပေး ရင် ရရှိလာ မယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးများ
January 22, 2021 by Khitalin Media
ဂျင်းမှာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီမယ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကော့ပါးသတ္တုတွေ ပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်စာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ည အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး သောက်ပေးလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. (၁) မူးမော်ခြင်း ကင်းဝေးစေမယ် သတ္တုဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် မူးမော်ခြင်းတွေ၊ ခေါင်းနောက်တာတွေကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ဂျင်းကို ဆေးအဖြစ်နဲ့ သုံးစွဲလာတဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် မှတ်တမ်းတွေအရ ခေါင်းမူးတာတွေ၊ အန်ချင်တာတွေကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေတာပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပျို့အန်တာတွေကို သက်သာစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၂) ဝိတ် ကျစေတယ် သင်ဟာ ဝိတ်ကျချင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဂျင်းရေနွေးကို သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ … Read more
ခှေးစာကို လုစားနရေရှာတဲ့ ဦးစောကွညျဝငျး(ရုပျသံ)
ခှေးစာကို လုစားနရေရှာတဲ့ ဦးစောကွညျဝငျး ခှေးစာကို လုစားနတေဲ့ ဦးစောကွညျဝငျး ပလုံလိုကျကောကျပွီး အသကျ75နှဈ ဖခငျကွီးနဲ့ အသကျ70နှဈ မိခငျကွီးကို စောငျ့ရှောကျနတော လမျးဘေးက အစားအစာကို မကျြရညျတှကေပြွီး စားနတော သနားစရာပါ။ သူ့ကိုသနားလို့ one star snack က မုနျ့​တှအေပွငျ ထမငျးပါကြှေးလိုကျတာ၊ သူ့ထမငျးဗူးကို ကုနျအောငျမစားဘဲ အိမျကမြှ စားတော့မယျဆိုပွီး မိဘတှေ အတှကျ ပွနျယူသှားတာ။ မိဘကိုစောငျ့ရှောကျတဲ့ အဘ အမွနျဆုံး အဆငျပွပေါစေ။ အဘကို နောကျနတှေ့လေဲ ထမငျးပို့ပေးပါဦးမယျလို့ ပွောခဲ့တယျ။ ကြှနျ တော့ ကူညီနတောတှေ ကို Likeပေးသူ အသဲပေးသူ Commentsရေးသူ Share ပေးသူ အား လုံးကို ကြှနျတျော ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျမိပါတယျ။ Comments Massage Box … Read more
ဒေါသကြီးရင်သူများနဲ့မတူပြီးအချစ်ရေးမှာတော့ အားငယ်တတ်တဲ့ စနေသားသမီးများအကြောင်း
စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကိုစရောက်ပြီဆိုကတည်းကစိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအရာဝတ္ထုတခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင်လုပ်တတ်တယ်။ ပြောချင်တဲ့စကားကို သွယ်ဝိုက်မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တာ စနေပါ။ အစွဲအလန်းကြီးတယ်။အမှတ်တရတွေကို သတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်ကြဘူး။ ဒါသကြီးရင်လေည်း သူများနဲ့မတူအောင်ပါပဲ။ စိတ်ကြီးတယ်။ မဟုတ်မခံတတ်ဘူး။ အချိန်ခဏလေးနဲ့ဒေါသအရမ်းထွက်တတ်ပေမဲ့ ဟုန်းခနဲထတောက်တဲ့မီးလိုပဲ။ဒေါသတွေကခဏပဲ။ ကြာကြာတော့စိတ်ထဲမထားတတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ သတ္တဝါတွေမြင်ရင် ချစ်တတ်တယ်။ သနားတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိကြတယ်။မျက်နှာတည်ပြီး ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်ခင်တတ်တဲ့စိတ်ထား စနေမှာ အပြည့်အဝရှိတယ်။ အနေအေးပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုလာခင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆို ဖော်ရွေစွာနေတတ်တာ စနေပါ။သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အချစ် ခင်မင်မှုတွေကိုလည်းလိုချင်ကြတယ်။ မိသားစုတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုလည်းခံချင်ကြတာလည်း စနေပါ။စိတ်ဆိုးနေရင်မျိုသိပ်မထားတတ်ဘူး။ ဖွင့်ပြောမိတတ်တယ်။ ပြောပြီးရင်လည်း အကြောင်းတခုကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန်စဉ်းစားတတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတတ်တာလည်းစနေပဲ။ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ဖြစ်ပြီးမခေါ်ကြရင် ကိုယ်ကဘယ်တော့မှအရင်စမခေါ်ချင်ကြဘူး။ မာနအိုးတွေပါ။ သူ့ဘက်ကစခေါ်ပြီဆိုရင်လည်း သူ့ထက် နှစ်ဆခင်မင်ပြတတ်တာစနေ။ခင်ရတဲ့သူတွေကို ကိစ္စတွေတိုင်း မပြောပြတတ်ဘူး။ အချို့သောအရာတွေကို လျှို့ဝှက်ထားတတ်တယ်။ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတိုင်းကိုလက်ကြောတင်းအောင်အကောင်းဆုံး … Read more
လူသိနည်းသော သောကြာသားသမီးတို့၏ အားသာချက်….
သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ အဆို၊ ပန်းချီလိုမျိုး အနုပညာအလုပ်တွေကို အထူးခုံမင်နှစ်သက်သလို ထူးကဲတဲ့ပါရမီလည်း ပါလာတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ် သင်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြတ်သန်းတတ်သူပါ ဒါပေမယ့် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကိုထိရှလွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အလျောက် အသည်းကွဲတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို နာကျင်မှုတွေ ပေးသွားတဲ့အခါမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ပြီး မကုစားနိုင်ကြပါဘူး သင်ဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို စာနာနားလည်ပေးတတ်လွန်းလို့ သင့်မှာအပေါင်းအသင်းတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာပါ သောကြာသားသမီးတွေဟာ စကားကို သွယ်ဝိုက်မပြောပဲ တိုက်ရိုက်ပြောတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး မဟုတ်မခံချင်စိတ် အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်… သောကြာသားသမီးတွေဟာ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကြား၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေကြားမှာ အရမ်းကိုပေါ်ပြူလာဖြစ်ပြီး ဖော်ရွေသလောက် မိသားစုတွေနဲ့တော့ သိပ်ပြီး မတည့်တဲ့သူတွေပါ… သောကြာသားသမီးတွေဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ ကျရှုံးတတ်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုခု၊ အလေးအနက်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုခုက ကိုယ်ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင် … Read more
သငျ့ အသကျ ဘယျလောကျ လဲ? ဘာ နမှေ့ေးလဲ? သာ မှနျမှနျ ပွောပါမှနျလှနျး လို့ ထပျခါ ထပျခါ ဖတျဖွဈ တဲ့ ဇနက ဟောကိနျး
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနက ဟောကိန်း… ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ် ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြား တွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း…. ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၅ နှစ် ဆိုရင် တနင်္ဂနွေ ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နန်း * အကွက်ထဲတွင်ရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ မိမိက တနင်္လာသားသမီး အခု ရောက်သက် ၂ဝနှစ်ဆိုရင် တနလာင်္ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပျက်* … Read more
ဆံပငျအရမျးကြှတျပွီးပါးနသေူတှအေတှကျ ဆံပငျအုံထူလာစမေယျ့ နညျးလမျး(၆)မြိုး…
ဆံပငျအရမျးကြှတျပွီးပါးနသေူတှအေတှကျ ဆံပငျအုံထူလာစမေယျ့ နညျးလမျး(၆)မြိုး… ဆံပငျဆိုတာ လူတဈယောကျအတှကျ ရုပျရညျသှငျပွငျအလှအပ တဈခုတညျးအတှကျ ရှိနတောမဟုတျဘဲ၊ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံ လိုအပျခကျြအရ ရှိနတော ဖွဈပါတယျ …။ ဒါကွောငျ့ တခွားသောအစိတျအပိုငျးတှလေိုပဲ ထိခိုကျပကျြစီးတတျ၊ အားနညျးတတျလို့ သခြောလေး ဂရုစိုကျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ဆံပငျတှေ အရမျးကြှတျပွီး ပါးလာမယျ၊ ပွားကပျနမေယျဆိုရငျ လူလညျး မကနျြးမာတဲ့ ပုံစံပေါကျနပွေီး ဘယျလိုမှ မလှနိုငျတာမို့ ဒီနညျးလေးတှနေဲ့ ပွနျပွီး ဂရုစိုကျပေးလိုကျပါနျော …။ (၁) ကွကျဥနဲ့ဒိနျခဉျြပေါငျးတငျနညျး ကွကျဥတဈလုံးလုံးကို ဒိနျခဉျြအနညျးငယျနဲ့ရောမှပွေီး ဦးရပွေားနဲ့ဆံပငျအနှံ့လိမျးပေးလိုကျပါ။ တဈနာရီလောကျထားပွီး ရအေေးနဲ့ခေါငျးလြှျောပေးပါ။ ခညျြသား တဘကျလေးနဲ့ သုတျပွီး hair dryer မသုံးပဲ သဘာဝအတိုငျး အခွောကျခံပေးပါ။ တဈကွိမျလုပျရုံနဲ့ ဆံပငျကြှတျတာ သိသိသာသာရပျတနျ့သှားပွီး တဈပတျတဈကွိမျ ပုံမှနျပွုလုပျပေးရငျ ဆံပငျတှေ … Read more